Linux Mint 19.1 Tessa ayaa Lagu Dhawaaqay, Imaatinka Nofeembar ama Diseembar 2018 | Laga soo bilaabo Linux
Mashruuca Linux Mint ayaa maanta ku dhawaaqay magaca iyo waqtiga la sii daayay ee la sii daayay ee cusboonaysiinta ugu horreysa ee dayactirka Linux Mint 19, Linux Mint 19.1.
Iyada oo ku saleysan Ubuntu 18.04 LTS Bionic Beaver, Linux Mint 19.1 ayaa loogu yeeri doonaa Tessa waxaana la filayaa inuu yimaado dabayaaqada Nofeembar ama horraanta Diseembar, sida uu sheegay Clement Lefebvre.
Lefebvre wuxuu kaloo sheegay in Linux Mint 19.1 Tessa waxay heli doontaa taageero shan sano ah, illaa 2023, iyo kuwa isticmaala Linux Mint 19 Tara waxay awoodi doonaan inay ku cusbooneysiiyaan noocyadan cusub iyagoo adeegsanaya aaladda cusbooneysiinta ee ku jirta nidaamka.
Sii deynta labaad ee Linux Mint 19.x taxane ah waxaa loogu yeeri doonaa Tessa, waxaa la sii deyn doonaa Nofeembar ama Diseembar ee sanadkaan waana la taageeri doonaa ilaa 2023, ”Clement Lefebvre ayaa qoraal ku soo qoray horraantii maanta.
Linux Mint 19.1 Tessa ayaa la imaanaysa Cinnamon 4.0
Ka mid ah horumarin badan iyo warar la imaan doona Linux Mint 19.1 Tessa, waan xusi karnaa ka mid noqoshada qorfeedka 4.0 jawiga garaafka, iyo sidoo kale qalab Ilaha Software-ka oo dib loo habeeyay - Ilaha softiweer - oo ay la socoto Xapp sidebar iyo cinwaanka cinwaanka.
Qalabka softiweerku wuxuu yeelan doonaa qayb loogu talagalayNoocyada ikhtiyaariga ah”, Iyo waliba ikhtiyaar cusub oo ah in dadka isticmaala ay ku dari karaan meelaha ay ku kaydsan yihiin dhib la’aan badan, iyagoo la qabsanaya go’aanka soosaarayaasha Waa inay u raraan astaamaha khaladaadka iyo keydka dbgsym.
Mawduuca asalka ah Mint-y sidoo kale waa la cusbooneysiin doonaa Imaatinka Linux Mint 19.1 Tessa, farqiga ayaa la wanaajin doonaa iyadoo laga dhigayo midabada asalka mid madow, taas oo u oggolaan doonta calaamadaha in ay aad u soo baxaan, sida ay codsadeen bulshada isticmaala. Faahfaahin dheeraad ah oo ku saabsan nuqulkan soo socda ee Linux Mint ayaa si dhakhso leh loo soo saari doonaa.
Wadada buuxda ee maqaalka: Laga soo bilaabo Linux » Qaybinta » Linux Mint 19.1 Tessa ayaa lagu dhawaaqay, oo imanaya Nofeembar ama Diseembar 2018